မြစ်ရေနည်းပါးချိန် ရေကြောင်းပြ အမှတ်အသားများအတိုင်း မောင်းနှင်ရန် ရေယာဉ်များကို သတိပေးချ? - Yangon Media Group
မြစ်ရေနည်းပါးချိန် ရေကြောင်းပြ အမှတ်အသားများအတိုင်း မောင်းနှင်ရန် ရေယာဉ်များကို သတိပေးချ?
ကလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆
ချင်းတွင်းမြစ်ရေနည်းပါးချိန်ကုန်တင် ရေယာဉ်များနှင့် ခရီးသည်တင်ရေ ယာဉ်များမလိုလားအပ်သည့်အန္တ ရာယ်များမှ ကင်းဝေးစေရန်၊ ချင်း တွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ရေ ပေါ်နှင့် ကုန်းပေါ်တွင်ပြသထား သည့်ရေကြောင်းပြအမှတ်အသား အတိုင်း စနစ်တကျမောင်းနှင်ကြ ရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထား ကြောင်းသိရသည်။
”ချင်းတွင်းမြစ်ရေနည်းပါးချိန် မှာ ရေယာဉ်တွေအနေနဲ့ရေ ကြောင်းပြအမှတ်အသားတွေ အ တိုင်းမောင်းနှင်မယ်ဆိုရင် ရေလမ်း ကြောင်းတွေပျက်စီးမှုမဖြစ်ဘူး။ ရေ ရှည်ခိုင်မယ်၊အခုဟိုနားက ဖြတ် မောင်း၊ သည်နားကဖြတ်မောင်း နေတော ရေကလုံးဝမစီးတော့ ဘူး။ ရေလမ်းပေါက်တွေပြန်ပြီး ပျက်စီးကုန်တယ်။ ဒါကြောင့်သတိ ပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်”ဟု တိုင်းဒေသကြီး ရေအရင်းအမြစ် နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးတင်အောင်ထွန်း က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်ကပြော သည်။ မြစ်ရေနည်းချိန်ကာလမှ အ စပြု၍ရေကြောင်းအသွားအလာ များပြားသည့်မုံရွာ-ဟုမ္မလင်း-ခန္တီး ရေလမ်းကြောင်းနှင့် ကျန်ရေစီး ကြောင်းတစ်လျှောက် ကမ်းပေါ်ပြ အမှတ်အသားများ၊ ရေပေါ်ပြအ မှတ်အသားများကို ချထားပေးခဲ့ ရာသတ်မှတ်ရေလမ်းကြောင်းအ တိုင်းမောင်းနှင်ကြရန်နှင့် ဖြတ် လမ်းများမှဖောက်ထွက်မောင်းနှင် မှုများ မလုပ်ကြရန်သတိပေးချက် များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တချို့နေရာတွေမှာ ရေ ကြောင်းပြအမှတ်အသားတွေက ပျောက်နေတယ်ချင်းတွင်းမြစ်က အချိန်နှင့်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ရေယာဉ် မောင်းတွေအနေနှင့် ကိုယ်တတ် ကျွမ်းသလို မောင်းနှင်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ သောင်တင်နေတဲ့ ရေယာဉ်တွေ၊ ဖောင်တွေဆိုတာလည်း ရေ ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့နေတာဖြစ် တော့ရေလမ်းကြောင်းထွင်ပြီး မောင်းကြရတယ်” ဟုမုံရွာဟုမ္မလင်း ရေယာဉ်မောင်း တစ်ဦးကပြော ကြားသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတွင် နှစ်စဉ်နိုဝင်ဘာလမှ မေလကုန် အထိကာလကိုရေနည်းကာလအ ဖြစ်သတ်မှတ်ထားရာ ယခုနှစ်တွင် နှစ်တိုင်းထက်မိုးရွာသွန်းမှု နည်း ပါးသည့်အတွက် ချင်းတွင်းမြစ်ရေ မှာနှစ်တိုင်းထက် စောစီးစွာမြစ်ရေ ကျဆင်းလျက်ရှိသဖြင့် ရေလမ်း ကြောင်းသတိပေးချက်များ ရေ လမ်းကြောင်းအမှတ်အသားများ ကိုချထားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
မြင်းစီးအားကစားဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ပိုင်မြင်း?
နေကြာဆီကို ပြည်သူများစားသုံးမှု များလာသည့်အပြင် ဈေးကွက်ပါကောင်းလာ သောကြောင့် မကွေးတိုင်း?
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန် အမေရိကန်သံရုံးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ တောင်
အသုံးစရိတ် ဥပဒေကို အထက်လွှတ်တော် အတည်မပြုသဖြင့် အမေရိကန် အစိုးရယန္တရား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရပ်?
”တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့ သတ္တိမရှိလို့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီနှစ်မှာတော့ လုပ်ဖြစ်မှ?